दुनियाँ चकित पार्ने अनौँठो कुखुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल ! जसको रहस्य थाहा पाउनुभयो भने पर्नु हुनेछ दंग ! – Medianp
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, मङि्सर २०, २०७५१०:१७0
एजेन्सी,२० मंसिर । इन्टरनेटको यो दुनियाँ साच्चै अजिवको छ । बेला बेलामा भाइरल हुने क्रममा मानिसमा मात्र हैन जनावर पशु पंक्षी समेत पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै यति बेला भने एक कुखुरा भाइर भएको छ । ३ फुट लामो खुखुरा ७.७ केजी तौल रहेको सञ्चार माध्यमले बताएका छन् ।
यूरोपको कोसोवाको एक पोल्ट्री फारमा रहेको उक्त कुखुरालाई मरकली नामले चिन्ने गरिन्छ । मरकलीसँगै उसको अन्य दुई साथी पनि रहेका छन् । कुखुराहरुलाई निकै केयर गरेर हेरचाह गर्ने भएको हुँदा उक्त कुखुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको बताइएको छ । चीनबाट आयात हुने यो जातको कुखुरा विश्वभर नै यसको माग तिव्र हुने गरेको बताइन्छ ।
उक्त प्रजातिको कुखुराको तौल सामान्य रुपमा पनि ५.५ केजी हुने गर्छ । तर यो कुखुराको तौल भने ७.७ केजी रहेको छ । पहिलो पटक कुखुराको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दा नक्कली भएको भन्दै नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने गरेको भएपनि मिडियाले कुखुराको बारेमा यथार्थ विवरण दिएपछि विश्वनै चकित परेको छ ।
१५ वर्षको उमेरमा नै यी युवतीले जन्माईन ६ सन्तान, परिवारले यस्तो भने